Miditra ao anatin’ny vanim-potoanan’ny lehilahy mahery i Torkia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Jolay 2018 6:25 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, русский, Ελληνικά, 繁體中文, English
Recep Tayyip Erdogan. Sary avy amin'ny servisin-gazetin'i Kremlin. Nomena alalana ho azo ampiasaina indray.
Nanamafy ny herin'ny lehilahy iray tonga teo amin'ny fahefana voalohany ho praiminisitr'i Torkia manoloana ireo sampam-panjakana rehetra tamin'ny taona 2003 ity fandresena tamin'ny fifidianana izay natao teo ambanin'ny fepetran'ny tany misy hotakotaka ity sady kandidà mpanohitra any am-ponja no mifaninana aminy.
Namaritra ny endriky ny parlemanta vaovao ihany koa ny 24 Jona. Manana toerana 295 amin'izany ny mpanohana an'i Erdogan ao amin'ny Antokon'ny Fahamarinana sy ny Fampandrosoana (AKP), izay tsy mbola mahazony maro an'isa feno. Na izany aza, azon'izy ireo antoka ny fanohanana avy amin'ireo mpiara-dia aminy ao amin'ny MHP nasionalista izay nahavita nahazo toerana 49. Mifehy ny parlemanta ny antoko roa tonta izay nanangana firaisana tao anatin'ny fanonganam-panjakana tsy nahomby roa taona lasa izay, miaraka amin'ny MHP izay tsy isalasalàna fa mpiara-miasa zandriny. Voahilika avy hatrany ilay mpanao lalàna iray avy ao amin'ny MHP izay nilaza fa “namonjy” an'i Erdogan sy AKP ny antokony ary tokony hitrandraka (hanararaotra) ny toerana misy azy.
Araka ny tatitry ny iraka nataon'ny OSCE/ODIHR, notontosaina tao anatin'ny tontolo izay manome vahana tanteraka ny antokon'ny fitondrana sy ny filoha ny fifidianana. Mirazotra amin'izany, raha misy antoko iray tsy nankasitrahana mazava tamin'izany tontolo izany, dia ny HDP ankavia mpomba ny Kiorda, izay nahavita nahazo vato mihoatra ny 10% indray ary tafiditra ao amin'ny parlemanta na dia nitarika ny fampielezan-keviny avy any am-ponja aza i Selahattin Demirtaş ny mpiara-mpitarika ny antoko niandry ny fitsarana azy nanomboka tamin'ny May 2016.
Efa Tiorka 107.000 sahady no very asa noho ny fanonganam-panjakana tsy nahomby tamin'ny taona 2016 izay nahatonga ny firenena ho latsaka an-katerena, ary nanambaran'ny AKP sy ny MHP ny fiafaran'izany amin'ity volana ity. Olona 50.000 teo ho eo no nogadraina ary mbola miandry fitsarana, maro amin'izy ireo no voampanga noho ny fikasana hanongam-panjakana, ao anatin'izany ny fikambanana Gulen izay voampanga ho nanomana fanonganam-panjakana. Mpanao gazety am-polony ankehitriny no any am-ponja ao amin'ny firenena iray miaraka amin'i Ejipta sy i Shina izay melohin’ ireo mpanaramaso ny haino aman-jery ho mitari-dalana amin'ny fiampangana ny fahalalahan'ny gazety.